Magaalada Baardheere Ayaa Ciidamada Amisom iyo Dowladda kuwa lagula eegtay Qarax – STAR FM SOMALIA
Magaalada Baardheere Ayaa Ciidamada Amisom iyo Dowladda kuwa lagula eegtay Qarax
Wararka ka imaanaya Magaalada Baardheere ee Gobolka Gedo, ayaa sheegaya saaka Magaaladaasi inuu ka dhacay qarax, qaraxaasi oo ahaa Miinada nooca dhulka lagu aaso.
Ciidamo ka tirsan kuwa Amisom iyo kuwa Dowladda oo ku socdaalayay Magaalada gudaheeda, ayaa qaraxaan lala eegtay waxaana ka dhashay Khasaaro sida wararka ay sheegayaan.
Ciidamada oo ku socdaalaya gudaha Magaalada ayaa mar qura lagu qarxiyay miinadaan, iyadoo jugta qaraxa laga maqlay Magaalada gudaheeda.
Khasaaro dhimasho iyo dhaawac ayaa la sheegayaa inuu ka dhashay qaraxaasi ciidamada lagula eegtay Magaalada gudaheeda, laakiin inooma suuragelin inaan ogaano inta uu la eeg yahay khasaaraha ka dhashay qaraxaasi.
Saraakiisha ciidamada Dowladda Federalka ee Degmada Baardheere oo aan la xiriirnay, ayaan inoo suuragelin inaan taleefoonka ku helno, si aan wax uga weydiino qaraxaasi iyo khasaaraha ka dhashay.
Qaraxa kadib ciidamada waxa ay fureen rasaas aad u xoogan, lama oga rasaastaasi inay ka dhalatay khasaaro soo gaaray dadkii shacabka ahaa ee goobtaasi ka agdhawaa.
Ciidamada Dowladda iyo kuwa Amisom, ayaa Bishii July ee sanadkaan waxa ay ka qabsadeen Ururka Al Shabaab, kadib markii guluf colaadeed ay ku qaadeen Magaaladaasi.
Injineer Caan Ahaa Oo Maanta Qarax Loogu Xiray Gaarigiisa Ku Geeriyooday
Qaramada Midoobe Oo Soo Dhaweysay Wada Hadalada Lagu Soo Afjaraayo Mooshinada Xildhibaanada Soomaaliaya